Nezvedu | HONGGUANG HANDAN CAST FOUNDRY CO., LTD
Iyo kambani yakavambwa muna 1998
Iyo inovhara nharaunda inosvika mazana maviri mu.
Kune vashandi mazana mana nemakumi mashanu nevashandi.
Kuburitswa kwegore negore kwemakumi matatu ezviuru zvematani castings
Iyo kambani yakapasa BSI system uye chigadzirwa chitupa, kuburikidza ne ISO14001: 2004 kwezvakatipoteredza manejimendi system chitupa, OHSAS18001 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi sisitimu setifiketi; zvakanyatsoenderana neEN124 uye mamwe maitiro epasirese ekuyedzwa. Iyo huru yekuyedza michina: kemikari element yekuongorora chiridzwa, spectrometer, metallographic maikorosikopu, choto nekukurumidza analyzer, yepasirese yekuyedza muchina, Brinell kuomarara tester, kuumba jecha rabhoritari, yedhijitari kuratidza cap yekumanikidza tester, pombi hydraulic murabhoritari, nezvimwe.
Chigadzirwa chinofukidza akasiyana zvigadzirwa, zvinosanganisira kutaurirana, simba, pombi ouinjiniya, nhandare uye matunhu maguta zvivakwa zvinoshandiswa nodular kukanda simbi shaft butiro, kabati, pombi fittings, mota zvishongedzo, michina zvishongedzo, zvekurima michini zvishongedzo, kukanda simbi vabiki, zvipfuyo zvishongedzo uye mamwe manomwe makuru akateedzana, anopfuura marudzi gumi nemashanu.